Mpi mpi: atumatu, maka ihe ha na-eje ozi, ma ha na-etolite, esi edozi n'ụlọ - Anumanu - 2019
Kedu ihe mpi nke oke ehi: anomy, ihe eji ya, o na eto
Mpi ndị dị n'elu isi ehi ahụ na-atụ egwu nke ukwuu, n'ihi ezi ihe kpatara ya, n'ihi na site n'enyemaka ha, anụmanụ ndị a na-alụ ọgụ ma na-egosi ike ha. Taa, anyị ga-ekwu maka usoro na nzube nke mpi ehi ahụ, yana usoro nhazi ha iji mee arịa.
Gịnị bụ mpi ehi ahụ?
Mee mpi ka eto
Kedu ehi nwere nnukwu mpi
Otu esi eme ka mpi ebule maka arịa dị n'ụlọ
Ịhọrọ mpi ziri ezi maka ngwaahịa n'ọdịnihu
Mwepụ nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ
Na-agbanye n'ime na n'èzí
Ụdị ihe osise
Kedu ihe mpi nke oke ehi: usoro anatomical
Mpi ehi ndị ahụ na-ekpuchi ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị ka mkpuchi. Usoro ihe siri ike a nwere mgbọrọgwụ, ahụ, na otu ape. Ebe nke mgbọrọgwụ - na mgbanwe na akpụkpọ ọkpọiso. N'elu bụ njedebe na-enweghị njedebe, ahụ bụ otu site na mgbọrọgwụ ruo n'elu.
N'elu mgbidi nke mpi ahụ, e nwere okpukpu abụọ: isi nke akpụkpọ na epidermis. Ihe na-emepụta nke epidermis na-arụpụta tubular stratum corneum. Ogologo mpi ahụ nwere ike iru n'ogo 70 cm n'ogologo nke 30 cm. Ụdị ha dị nso na conical, na-emekarị ka ha gbadaa ma ọ bụ arc.
Ị ma? A na - amụ ụmụ ehi ma ụmụ nwoke na - enweghị mpi, ha na - apụta na ụmụ ọhụrụ mgbe ha dị ọnwa abụọ.
Elu nke mpi nke anụmanụ ndị a dị mma, enwere mgbaaka anaghị agba ume kwa afọ na ya. Ụdị nke ihe ndị a siri ike n'elu isi ehi dị iche iche: site na ọcha ruo nwa ojii. E nwere ndị nnọchianya nwere àgwà na-acha ọbara ọbara na-ahụchasị, nke ị nwere ike ịhụ usoro mara mma. A - epidermis nke akpụkpọ ụkwụ; B - ya derms; B - ọkpụkpụ okpokoro isi; G - ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ nke ọkpọ ihu (mkpanaka mpi); D - akụkụ njikọ nke okpomoku dị ala n'etiti mkpuchi mpi na isi ya. Mpi ndị oke okenye na oke ehi na oke ibu na nha dị oke uru.
Epi mpi nwere ọtụtụ ọrụ:
nkwurịta okwu (nhazi nke mmekọrịta ndị isi);
A na-eji oké ehi na-arụ ọrụ agha. Site n'enyemaka ha, ha na-agbachitere ókèala, nri ma ọ bụ ìgwè ehi.
Ghọọ onwe gị ka ị mara ụdị ụdị anụ ọhịa ndị a na-ahụ maka abụba.
Ndị isi na-enwekarị ọgụ na ibe ha, nke a na-eme ka mpi ha mebie. Nke a nwere ike ime site na ileghara anụmanụ anya. Ọ bụrụ na nsogbu nke mmebi ahụ bụ naanị n'ụbụrụ ahụ, mgbe ahụ ihe niile na-eto ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmebi ahụ dị mgbagwoju anya ma mee na isi, mgbe ahụ ọ dị oke ize ndụ. Ọbara na-abanye na mmehie nke anụ ahụ ma na-agafe n'ime imi. N'okwu a, onye ọhụhụ nwere ike inye ndụmọdụ mpi mpi iji chekwaa ahụ ike nke anụmanụ.
Ndị nwere nnukwu mpi bụ bulls. Ha nwere usoro a siri ike n'elu isi ruo 1.5 n'ogologo anọ na mita anọ, ihe dị ka kilogram 45. Ogologo mpi site na otu tip ruo na nke ọzọ nwere ike ịbụ 2.4 m.
Mpi nke anụmanụ ndị a na - eme dị ka ndị na - egbuke egbuke: ọbara nke na - ekesa n'ime ha na - eme ka mmiri dị jụụ wee gbasaa n'ime ahụ dum, si otú ahụ mee ka ọ dị jụụ. Nke a bụ àgwà dị oké ọnụ ahịa, n'ihi na n'Africa, ebe Vatussi wepụtara, okpomọkụ ikuku pụrụ iru +50 Celsius.
Ị ma? Dị ka ọdịnala ndị ugwu si dị, mgbe onye ntorobịa nọ n'ógbè ahụ ruru afọ 16, a na-awụsa mmanya n'ime mpi nke anụ. Mgbe ọ na-eme ememme a n'ihu ndị ọzọ, ọ na-aghọ okenye.
Na Caucasus, a na-eji mpi ehi mee ihe dị ka akpa maka ịṅụ mmanya. N'ile anya na mma nke ngwaahịa a, ọtụtụ ndị chere banyere otu esi eji ụgbọ ahụ dị n'ụlọ. N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa ụdị nsogbu niile na-eso usoro a.
Iji mee arịa, iji mpi ọ bụla agaghị ezuru, n'ihi na nke a dị mkpa na ọ bụ anụ ọhịa. N'ezie, ị nwere ike wepụ ya na antelope ma ọ bụ impala, mana ọ bụghị mmadụ niile nwere oke ọhụụ. N'ógbè anyị, ọ bụ ezigbo mma iji anụmanụ ndị a dịka yak, bison, buffalo ma ọ bụ ehi nkịtị.
Ná mmalite nke usoro iko, ị ga-enyocha mpi ahụ nke ọma: ịchọrọ ịchọta otu ụdị nke nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Ọ ka mma iji mgbidi siri ike n'isi isi ehi e gburu na nso nso a dika ihe. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na n'oge nchekwa ogologo oge ihe onwunwe nwere ike imetụta ọnọdụ gburugburu ebe obibi.
Mụtakwuo banyere ụdị nri ị na-azụ.
Mgbe okpomọkụ na-agbada gburugburu mpi ahụ, a pụrụ ịhụ nchebe, ma ọ bụrụ na a hichaa ya ma bụrụ nke a mịrị amị, ha na-agbapụ. N'okwu ndị a, ejighị ihe dị otú ahụ akwadoro.
Ihe ọzọ dị mkpa nke chọrọ nhazi nke ọma bụ iwepụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na anaghị ahụ anya, ọ ga-adị gị mkpa ịkpụcha ya na otu ọhụụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ahụ mkpanaka ahụ, mana iwepụ ya na mkpuchi mpi anaghị adị mfe. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịfụ mpi, mana usoro a dị ogologo ma nwee ike izu izu 2-3. Ị nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe ma mee mgbaze. Nke a ga-esonyere ya na ísì ísì ụtọ, yabụ ị ga-agbanye mkpuchi ma mepee windo niile.
Ọ dị mkpa! Maka mgbaze mpi, jiri efere, nke ahụ agaghị eme ebere iji tụfuo ya. Mgbe usoro a gasịrị, ọ gaghị adị mma maka nri.
Ọ ga-adị mkpa ka obụpde maka awa 2-3, mgbe ahụ, a ga-ewepu mpi ahụ na akpa ma kụọ aka n'elu osisi ahụ ruo mgbe mkpanaka ahụ dapụtara. Ị nwekwara ike iji ogologo screwdriver iji wepụ mkpanaka ahụ, nke ịchọrọ iji dozie nsogbu ahụ.
Tupu ịmalite ịmị, mee ka mpi ahụ dị jụụ ka ọ ghara imebi ihe maka arịa n'ọdịnihu.
A na-eji ihe ndị dị otú ahụ eme ihe n'ime ime ma ọ bụ mpụga nke ọzọ:
Ihe mgbaru ọsọ na nke a bụ iji kpuchie elu iji gbaa. Mpụga agaghị eme ka ọ bụrụ ihe isi ike. Mgbe ị na-eji igwe egwu egwuri egwu, ị ghaghị ịkpacha anya ka ị ghara ịgafe ya. Na enweghị igwe, usoro ahụ ga-adị ogologo, na nke a, ọ dị mkpa iji akwụkwọ akpụkpọ anụ dị iche iche, na-amalite site na nnukwu ma na-ejedebe na ntakịrị. Akpa, n'ime mpi ị ga-aga site na nchapu, wee mezie ngwá ọrụ gị.
Ọ dị mkpa! Nchịkọta na-adịghị mma n'ime mpi ahụ nwere ike iduga na-atọ ụtọ mgbe ị na-awụsa mmanya n'ime ite ahụ.
Iji mee nke a, were otu waya siri ike ma debe ya na sandpaper. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye eriri waya na mkpọtụ ahụ, ya mere, a na-edozi akụkụ nke mpi mpi ahụ. Maka akpatre, a na-eji GOI egwu na mado.
Ọtụtụ mgbe, ndị omenkà kwenyere na ụgbọ ahụ kwesịrị ịdị ọcha, ya mere ọ na-emerụ ya na ihe dị iche iche pụrụ iche. Chemicals nwere ike inwe mmetụta dị ike na ihe ahụ, ya mere, tupu ịmichaa mpi ahụ, a na-atụ aro ka ị nwaa mpempe anụ na-enweghị isi dịka ihe.
Video: nhazi nke mpi ehi
Ịnwere ike ịdakwasị arịa a mara mma, nke a na-egbu maramara ma ọ bụ nke a tụrụ atụ. Otú ọ dị, azụmahịa a chọrọ nkà ọkachamara. I nwekwara ike ichota ngwaahịa a na ejiji ma obu ihe eji eme ya. N'ihi ya, ị ga-enwe arịa mara mma nke ị ga - aṅụ mmanya, yana iji ya chọọ ime ụlọ ahụ mma.
Ebumnuche nke mpi maka oke ehi ahụ abụghị naanị iji mee ka isi ya dị mma, ha na-arụkwa ọrụ dịka ngwá ọrụ dị ike. Otú ọ dị, ndị mmadụ nwere ogologo oge na-eji ha eme ihe maka ịchọ mma.
N'iji usoro ihe omumu nke nhazi usoro a siri ike n'isi anu ahu, i nwere ike ime otu ihe maka ihe ọṅụṅụ di mma ma jiri ya n'ime ulo.
Kedu tomato na-eto eto n'etiti etiti, na Urals na Siberia? Nyocha banyere ala ndị dị ala na ndị ọzọ na-emeghe ala
Tomato na griin haus: mgbe na otu kachasị mma ịkụ ihe oriri na Russia?
Ndepụta nke ụdị anụ ndị dị na ya
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu ihe mpi nke oke ehi: anomy, ihe eji ya, o na eto